URobert Louis Stevenson. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. Iincwadi zakhe ezingafiyo | Uncwadi lwangoku
Zizalisekisiwe ngoku Iminyaka eyi-123 ukusweleka kuka Umbhali waseScotland uRobert Louis Stevenson kwisiqithi saseSamoa. Isifo sephepha samthabatha eneminyaka engama-44, kodwa wayehlala kuso kakhulu kwaye esoloko eneziganeko ezininzi njengalezo wayezibalisa kwinoveli zakhe. Kuhlala kwaye kuya kuhlala kunjalo omnye wababhali abaziwayo nabathandwayo zehlabathi.
Isiqithi seTreasure, uMnyama oTolo, iTyala eliQhelekileyo likaGqr, okanye obunye ubuthathaka bam obu INkosi yaseBallantrae… Izihloko esizifundileyo okanye esizibonileyo kulungelelwaniso lwemiboniso bhanya-bhanya, iintsomi zabo namabali sele engafanga. Ndiziphonononga ezinye zazo njengomvuzo ophantsi wokuba ngowona mbhali we-adventure ubalaseleyo kwilizwe lase-Anglo-Saxon.
1 Isiqithi sobuncwane
2 Amabali aseScotland
4 Utolo olumnyama
5 Imeko engaqhelekanga kaGqirha Jekyll kunye noMnu Hyde
6 Usathana osebhotileni kunye namanye amabali
Yapapashwa eLondon ngo-1883. Ixesha elide uJohn Silver, uJim Hawkins, uCaptain Flint, uBilly Bones, Inja emnyama, uBen Gunn, uKnight Trelawney, uKapteni Smollet Hispaniola… Amagama amiselwe ngonaphakade kwimemori yethu yokufunda. Enye yeenkumbulo zam zokuqala zale noveli zimi ngokufunda elinye lamaqhekeza alo, incoko kunye noBen Gunn, kuvavanyo lokuqonda ukufunda kuvavanyo oluthile lwengqondo esalunikwa esikolweni.
Emva kwexesha uninzi lwabaninzi lundijoyina ekubeni ndiyifundile yabantwana, yabantu abadala, eyesiNgesi, kunye nokuyibona kulungelelwaniso oluninzi okanye kwiikhathuni. Eyona ndlela yam isondeleyo ekusetyenzisweni kwayo, iiveki ezine endizichithe eBristol ngehlobo elinye ndizama ukuqashisela apho ikhoyo indlu yabahambi. Umkhosi weBenbow o I-Spyglass, UJohn Silver's Tavern. Ibali le-adventure laphakade.
Amabali amahlanu abekwe eScotland aqokelelwa ndawonye kulo mqulu.
Isela lomzimba ijolise kwiintsuku zokuphuhliswa kweAnatomy njengenzululwazi, xa amagumbi okufundela efuna izidumbu, kwaye izaphuli mthetho ezingathembekanga ziphanga amangcwaba.
Ijanet egoso-goso Libali lobugqwirha nelokugcina, kwaye uxelela ukuhlukunyezwa apho umfundisi wedolophu yaseScotland aphantsi kwakhe, ebotshelelwe kwiinkolelo ezindala.
En Amadoda avuya isenzo sibekwe kunxweme olusemantla eScotland, kwaye isixelela ngokukhangela ubuncwane benqanawa eyaphuka inqanawa yaseSpain.
Indawo engaphantsi kwesibetho Isisa kwigumbi elingaphantsi apho kuhlala ububi bendalo engaziwayo.
Inkundla yeziqhagamshelo apho umrhwebi waleqwa nguCarbonari wase-Italiya ofuna isixa esikhulu kuye abalekele kwindlu yendlu apho angqingiweyo khona.
Eli bali lifutshane lithathwa njengenye yobugcisa bakhe, kodwa ayaziwa kancinci ngenxa yobunzima bokuyiguqulela kuba ibhalwe ngolwimi lwaseScotland. Kumnyama kakhulu ngemo engqongileyo yasemaphandleni uStevenson awayeyazi kakuhle kwaye apho ezo zoyikekayo zenziwe khona izilingo zamagqwirha.
Yapapashwa ekuqaleni njengebhulethini ngo-1883 wonke. Cwangcisa England yamaxesha aphakathi yenzeka ngexesha Imfazwe yeeRoses ezimbini ezazifaka izindlu zaseLancaster naseYork ngesithsaba selizwe. Ubalisa ibali lika UDick shelton, othi, emva kokuba ebalekele ababulali bakayise, afumane ikhusi phakathi kwezaphuli-mthetho zika inkampani yotolo olumnyama, ngubani oza kumnceda kwimpindezelo yakhe.
Imeko engaqhelekanga kaGqirha Jekyll kunye noMnu Hyde
Lo Inoveli emfutshane yenye yemisebenzi yakhe emikhulu kwaye apho uStevenson ajongana nesihloko esimxakekise ngobomi bakhe bonke: Ubume bendalo yomntu. Wambeka entliziyweni ka UVictorian london kwaye luluhlu lobungqina obuvela kumangqina ohlukeneyo anenjongo yokutyhila imfihlakalo. IJekyll kunye neHyde ziziko elahlulweyo kubini. U-Hyde ubuntu bukaJekyll obumangalisayo kwaye ufuzisela ububi bokuzicinezela, obukhe wakhululwa, akanakulawula. Kwaye mna uJekyll noHyde baya kuhlala benobuso belo silo sinkulu esasikhona Ispencer tracy.
Usathana osebhotileni kunye namanye amabali
Olu dibaniso amabali amahlanu ibandakanya Abaphangi bomzimba; UMarkheim, que sisifundo seengqondo somzabalazo phakathi kokulungileyo nokubi; Olala Libali elithandanayo elinomxholo we-lycanthropy ngasemva; Ulwandle lwaseFalesá Ibali le-adventure elinenkangeleko ebonakalayo kunye Usathana osebhotileni Iphinda ibuye intsomi yokomfuziselo kwiiLwandle ezisemazantsi.
Enye yeencwadi eziqaqambe kakhulu. Waqala ukuyibhala ngo-1887 kwidolophu ekumda ophakathi kwe-United States ne-Canada, wayigqiba kwiminyaka emibini kamva e-Waikiki, isiqithi esinelanga kwii-South Seas. Inoveli, ephenjelelwa bubomi bokuhamba kukaStevenson, ithatha useto olwahlukeneyo, imihlaba, iminyaka namazwe.
Ibali loonyana ababini beNkosi u-Durrisdeer, kwabo bajongene nekamva, ezopolitiko kunye nothando, babenoludwe lwefilimu oludumileyo kwifilimu yowe-1953 Kudlala u-Errol Flynn, enye intsomi yezona zinto zibalaseleyo zesikrini esikhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » URobert Louis Stevenson. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. Iincwadi zakhe ezingafiyo